Intee le’eg tahay cududda ciidan ee dalka Iiraan? | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Intee le’eg tahay cududda ciidan ee dalka Iiraan?
Intee le’eg tahay cududda ciidan ee dalka Iiraan?
(Hadalsame) 05 Jan 2020 – Dowladda Iran ayaa wacad ku martay inay aargoosan doonto ka dib dilkii abaanduulihii ugu awoodda badnaa militariga dalkaasi oo khamiistii ay Mareykanka duqeyn ku dileen.
Previous articleMUQDISHO: Gaari la tuhmayo inuu qarax sido oo lasoo dhigay jidka dhiniciisa (Dadwaynaha oo tillaabo qaaday)
Next articleDEG DEG: Garoonkii Lamu oo albaabbada loo laabay & wararkii ugu dambeeyay ee weerarka ka dhacay!